အမူအကျင့်စွဲမှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများ - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိпорно
အမူအကျင့်စွဲဘို့ diagnostic တူရိယာ: ခြုံငုံသုံးသပ် (2007)
Psychosoc Med ။ ၂၀၀၇; 2007: Doc4 ။
အွန်လိုင်းအောက်တိုဘာ 4, 2007 တွင်ထုတ်ဝေသည်။
Ulrike Albrecht,1 နီနာအဲလန် Kirschner,1 နှင့် Sabine အမ်Grüsser*,1
အရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သည့်စွဲခြင်း၊ အမူအကျင့်စွဲမှုဟုခေါ်သည့်ပြင်ပစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးများမသုံးစွဲပါ။ စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်မှုများမှသာသွေးဆောင်ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝဓါတုဗေဒဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိဆေးပညာဆိုင်ရာသက်ဆိုင်သောအလွန်အကျွံဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများဖြစ်သောဆေးပညာဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၊ အလွန်အကျွံဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်မှီခိုသောအပြုအမူ၏ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာကန့်သတ်ထားသည်။ ယနေ့အချိန်အထိအလွန်အကျွံဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူအားရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့အတွက်တသမတ်တည်းသောအယူအဆမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟုခေါ်သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးခေါ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောင်မြင်သောကုထုံးသက်ရောက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
keywords: အမူအကျင့်စွဲ, diagnoses, psychometric တူရိယာ
၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်လောင်းကစား ၀ တ္ထုမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအဖြစ်လောင်းကစားခြင်းကိုကျွမ်းကျင်သူများကလူသိများသည်။ အရက်၊ မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းကဲ့သို့သောပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးအပြင်လောင်းကစားဝိုင်းစွဲမှုကိုလည်းထိုအချိန်ကစာပေတွင်ဖော်ပြထားသည်။1] ။ မကြာသေးမီကလုံလောက်သော nosology နှင့်အပြုအမူစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများကိုပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အထိအလွန်အကျွံဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကိုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့အတွက်တသမတ်တည်းအယူအဆမရှိသေးပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤအခေါ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ထားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အောင်မြင်သောကုထုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်အကျွံကောက်ယူသောအပြုအမူတိုင်းသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူမဟုတ်ပါ ဘာသာရပ်များသည်သူတို့၏အလွန်အကျွံအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောစွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများကိုအနည်းဆုံး ၁၂ လလုံးလုံးပြည့်မီရန်လိုသည်။ တိကျသောရောဂါတစ်ခုသာလျှင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ၊ ရောဂါမကူးစက်နိုင်သည့်အလွန်အကျွံအပြုအမူနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအလွန်အကျွံအပြုအမူများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိ၊ “ ပစ္စည်းမဟုတ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု” ကိုနိုင်ငံတကာတွင်အသုံးပြုသောစိတ်ရောဂါ၏ရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲနှစ်ခု၊ DSM-IV-TR (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောစာရင်းဇယားလက်စွဲ) တွင်မဖော်ပြထားပါ။2] မ ICD-10 (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း) ၌လည်းမရှိပါ။3] ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲတွင်ပါဝင်သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား "အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားမရချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှု၏ရောဂါ" အမျိုးအစားထဲမှာစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအလွန်အကျွံအပြုအမူများကို“ Impulse Control of Disorders” အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာများချမှတ်ရန်သင့်လျော်သောခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိအသိပညာအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောရောဂါတစ်ခုလိုအပ်သည်။
အမြင်တစ်ခု neurobiological အချက်အနေဖြင့်, သာအမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ ဦး နှောက်၏ neurotransmitter စနစ်များကိုထိခိုက်စေ, သော pharmacological တ္ထုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အားဖြည့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် တိုက်ရိုက် ဤစနစ်များကိုထိခိုက်သည် (ဥပမာ dopaminergic system, , , ) ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များသည်အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအခြေခံသောဘုံယန္တရားများ၏ယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည် (cf.7], ) ။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအတွက်ဆုလာဘ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်အကျွံပြုလုပ်ထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများ (ဥပမာ - အလွန်အကျွံစျေး ၀ ယ်ခြင်း / အားကစား၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား / ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်း) ကိုစွဲလမ်းစေသောအလားအလာရှိသည်ဟုယူဆစေသည်။ ဤယူဆချက်ကိုလည်းလက်တွေ့အတွေ့အကြုံများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုစံသည်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲလမ်းမှုစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟုစာရေးသူအမြောက်အများကတင်ပြကြသည်။9], , , , ) ။ အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုခံစားနေရသောလူနာများသည်အမူအကျင့်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ရန်တွန်းအား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများ၊ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ မျှော်လင့်သောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်သည်းခံနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်း ဥပမာအားဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စက်အမျိုးမျိုးကိုလောင်းကြသည်။ ထို့အပြင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုတို့အကြားမြင့်မားသောဆက်စပ်မှုသည်သူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာယန္တရားများကိုအကြံပြုသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အလွန်အကျွံကောက်ယူသောအပြုအမူများကိုခွဲခြားရန်သင့်လျော်ပုံရသည်။
ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုအတွက်ဖော်ပြသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရောဂါများကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများမကြာခဏပေါ်လာခြင်းသည်လည်းအမူအကျင့်စွဲရောဂါရှိသည့်လူနာများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊12]) ။ ထို့အပြင်မကြာခဏဖော်ပြသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအဖြစ်အပြုအမူစွဲလမ်းသူများသာမကအခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများတွင်ပါတွေ့မြင်နိုင်သည်။13]) ။ မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များအရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကြောင့်အမူအကျင့်စွဲအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လုံလောက်မှုမရှိပုံရသည်။8] ။ ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမူအကျင့်စွဲခြင်းအကြားလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏နှိုင်းယှဉ်ချက်သည်အမူအကျင့်စွဲမှုကိုစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုအားပေးသည်။14], , , ) ။ စွဲလမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများရှိနေသော်လည်းစွဲလမ်းမှု၏အထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သောအဆက်မပြတ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ) သည်လည်းအမူအကျင့်စွဲရောဂါရှိသူများတွင်အဓိကဖြစ်သည်။
ရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်မရှိခြင်းကြောင့်စာရေးသူအမြောက်အများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအကဲဖြတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူရိယာများကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ရောဂါရှာဖွေမှုစံများကိုအကဲဖြတ်ရန်စံသတ်မှတ်ထားသောတူရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၏အယူအဆကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှုအသုံးပြုခြင်းကိုတန်ပြန်ရန်နှင့်ပုံမှန် (ရောဂါဗေဒမဟုတ်သော) အလွန်အမင်းအပြုအမူနှင့်ခွဲခြားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိရိယာများသည်ယခင်ကတည်ရှိခဲ့ပြီး၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအတည်ပြုခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဤနေရာတွင်တင်ပြသောကိရိယာအများစု၏ဖော်ပြမှုမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတူရိယာအများစု၏စာရင်းအင်းအရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုတင်ပြရန်မပြီးနိုင်သေးပါ။
စာရင်းအင်းအရည်အသွေး (ဥပမာ၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု) နှင့်ရွေးချယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောဖော်ပြချက်များမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေသည်။ ထို့ကြောင့်တိကျသောရောဂါလက္ခဏာကိုမကြာခဏမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင်တင်ပြသောတူရိယာအများစု၏အားသာချက်မှာရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုထုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပြုအမူစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်သင့်လျော်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုနောက်ထပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါကဏ္ areas တော်တော်များများ (လောင်းကစား၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ အားကစား၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်နှင့်လိင်စသည့်) အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အများဆုံးဖော်ပြလေ့ရှိသောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုခြုံငုံသုံးသပ်လိမ့်မည်။
အမျိုးမျိုးသောအကဲဖြတ်ကိရိယာများကိုလက်တွေ့အသုံးချခြင်းအားဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခြင်းကိုစဉ်းစားရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းအရင်းအနေဖြင့် "အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု" ၏ရောဂါရှာဖွေအကဲဖြတ်မှုတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာအားလုံးအတွက်တရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအချက်အလက်များသည်အနည်းဆုံးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
တင်ပြသောတူရိယာအများစုသည်ရောဂါလက္ခဏာပြရန်အဓိကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ တူရိယာများစွာသည်ကုထုံးဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များကိုနောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ်ရန်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ဥပမာ -“ Gambler's Belief Questionnaire” (GBQ)  လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမှတ်ခံစားမှုများကိုအကဲဖြတ်သည့်သို့မဟုတ် Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale - Shopping Version (Y-BOCS-SV) 18].
အလွန်အကျွံလောင်းကစားခြင်းသည်အများအားဖြင့်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုပုံစံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ရှိပြီးသားစိတ်ပညာ၏ပမာဏနှင့်မတူကွဲပြားမှုကြီးမားသည်။ အလွန်အကျွံလောင်းကစားခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (ICD-10 [ရှိပြီးသားရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစံများ) မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။3]; DSM-IV-TR ), အရာ "ရောဂါဗေဒလောင်းကစား" အမှန်ပင်တစ် ဦး ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားပေမယ့်တစ် ဦး စွဲအဖြစ် operating ။ သုတေသနရလဒ်အသစ်များသည်ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒလောင်းကစားကိုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်နောက်ထပ်မော်ဒယ်များကိုပိုမိုပေါင်းစည်းစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အခြေခံစိတ်ပညာဆိုင်ရာသုတေသနမှအသစ်သောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများကြောင့်, စွဲအယူအဆကျယ်ပြန့်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည် (ဥပမာ,19], , ; သုံးသပ်ချက်ကို cf. အတွက် , ) ။ ထို့အပြင်လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းများတွင်အဓိပ်ပါယျမရှိသောယုံကွညျခကျြမြား၊23], ), ကျယ်ပြန့်လက်ခံနှင့်၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်စဉ်းစားသည်။ လောင်းကစားခြင်းအလွန်အကျွံလောင်းကစားခြင်း၏ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုအဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်သည့်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော၊ ဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအန္တရာယ်များ၊ ပြproblemနာများနှင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအဆင့်များကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးများဆုံးနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာများမှာ“ South Oaks Gambling Screen” (SOGS) ဖြစ်သည်။25], သူကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်၏အခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်လက်တွေ့အင်တာဗျူးများအတွက်လက်တွေ့နမူနာများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်ကတီထွင်ခဲ့သည်။ SOGS မှအသုံးပြုသောအခြေခံစံနှုန်းများသည် DSM-III-R (APA) မှအသုံးပြုသောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံများမှရရှိသည်။26] ။ အရေးကြီးသောမှတ်စုတစ်ခုအရကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ DSM-IV တွင်ပြောင်းလဲမှုရှိကြောင်းထောက်ပြလိုသည်။ )27]) SOGS တွင်မပါဝင်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလက်တွေ့မဟုတ်သောနမူနာများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ရောဂါဗေဒနှင့်မဟုတ်သောလောင်းကစားသမားများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုတွင်တိကျမှုလျော့နည်းစေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းကအထူးသဖြင့် DSM-IV ၏ရောဂါရှာဖွေရေးစံနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၏အကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခြားတူရိယာများနှင့်ကောင်းမွန်သောကိုက်ညီမှုနှင့် convergence validity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကနေဒါပြProbleနာလောင်းကစားအညွှန်းကိန်း (CPGI)28] အများပြည်သူအတွက်ပြသနာများသောလောင်းကစားခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ကိရိယာသစ်တစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းလွှာကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်။ ပထမပိုင်းတွင်လောင်းကစားခြင်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ အသုံးစရိတ်နှင့်လောင်းကစားလှုပ်ရှားမှုများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုကြာချိန်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများပါဝင်သောလောင်းကစားခြင်းပါဝင်သည်။ ဒုတိယအပိုင်း“ ပြProbleနာလောင်းကစားခြင်းအကဲဖြတ်ခြင်း” တွင် DSM-IV (APA) အရရောဂါလောင်းကစားခြင်းစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံထားသည့်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။27] နှင့် SOGS ၏ပစ္စည်းများ  အသီးသီး။ တတိယအပိုင်း“ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု” သည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သဘောထားများ၊ လောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်သောအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိခြင်းနှင့်မိသားစုပြhistoryနာရှိသောလောင်းကစားခြင်း၏သမိုင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ်အရဖြေဆိုသူတစ် ဦး စီကိုလောင်းကစားခြင်းအပြုအမူ (၅) မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် (လောင်းကစားမဟုတ်သောပြfromနာမှလောင်းကစားခြင်းအထိ) ။ ယခုအချိန်အထိအကဲဖြတ်ကျေနပ်ဖွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုညွှန်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် DSM-IV စံညွှန်း (APA) ကိုကိုးကားပြီးရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏အကဲဖြတ်ဘို့နောက်ထပ်စိစစ်တူရိယာ  သည်မက်ဆာချူးဆက်လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (MAGS) ဖြစ်သည်။29] ။ MAGS သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ (သည်းခံစိတ်၊ ရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများ)၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (စိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါ၊ အပြစ်ရှိမှု) နှင့်လူမှုရေးနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏လက္ခဏာများကိုခွဲခြမ်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်သည်။ တစ်ခုမှာ“ တိုတောင်းသောမီချီဂန်အရက်စွဲမှုစစ်ဆေးခြင်း” (SMAST)  နှင့်အခြား DSM-IV စံညွှန်း (APA) [နှင့်27] ။ MAGS သည် DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်လုံသောတရားဝင်မှုကိုပြသသည်။
လက်တွေ့အသုံးပြုရန်အတွက်ပိုမိုရိုးရှင်းသောနှင့်ပိုမိုချွေတာသောကိရိယာတစ်ခုမှာ“ Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale” (Y-BOCS,31]; cf. ရောဂါဗေဒလောင်းကစား (PG-Y-BOCS) မှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) "Compulsive ဝယ်ယူမှု၏အကဲဖြတ်"  ။ ဤတိကျသော Y-BOCS ဗားရှင်းသည် SOGS နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုပြသသည်။
The National Opinion Research Centre DSM-IV လောင်းကစားပြProbleနာများအတွက်မျက်နှာပြင် (NODS)  ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက် DSM-IV စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံထားသောလည်း၊ ၎င်းသည်တသက်တာအတွင်းနှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်းပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည့်အကြေးခွံနှစ်ခုပါရှိသည်။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ပြscoreနာမဟုတ်သောပြproblemနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုရမှတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များအရ NODS သည်ကောင်းမွန်သောစမ်းသပ်မှု / ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပြင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများအားအသိအမှတ်ပြုခြင်းတွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့်တိကျမှုတို့ကိုပြသသည်။
မြင့်မားသော sensitivity နှင့်တိကျသောတိကျသောကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ကိရိယာသည်“ မုသား / အလောင်းအစားမေးခွန်းလွှာ” ဖြစ်သည်။34],  ။ ၎င်းတွင်ပစ္စည်းနှစ်ခုသာပါ ၀ င်သည် -“ ငွေပိုများများလောင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုသင်ခံစားဖူးပါသလား။ ” ပြီးတော့ "မင်းမင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုမင်းလောင်းကစားဝိုင်းဘယ်လောက်များများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်ခဲ့ဖူးတာလဲ။ "
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားရှာဖွေရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးများသည်ရှားပါးသည်။ (စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်) အနည်းငယ်သောအင်တာဗျူးများအနက်“ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလက်တွေ့ကျသောအင်တာဗျူး” (SCI-PG)  ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဤနေရာတွင်မိတ်ဆက်သည်။ SCI-PG တွင် DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက် (APA) ကိုအကဲဖြတ်သည့်အချက် (၁၀) ခုပါဝင်သည်။27] ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက် (ပါဝင်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်အရာ (၁၀) ခုနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏ DSM-IV ရောဂါအတွက်ဘာသာရပ်များသည်ပါဝင်မှုစံနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်ငါးခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအရာများကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီးရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းတွဲမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ”) နှင့် ပါတ်သက်၍ အချက်တစ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရမည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏လက်တွေ့နမူနာများတွင် SCI-PG သည်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ပြီးတိကျမှန်ကန်ပြီးကောင်းမွန်သောဟောကိန်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
လောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်သောသိမှတ်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကောက်ယူခြင်းများသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်ကိုလူသိများသည်။23], ) ။ ကုသမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောဤတိကျသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာကောက်ယူခြင်းများသည်အများအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာများဖြင့်အကဲဖြတ်ရသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကိုအောက်တွင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
“ လောင်းကစားစိတ်ဓာတ်” (GAS)  လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောယေဘုယျအားဖြင့်အထူးသဖြင့်လောင်းကစားရုံများ၊ မြင်းပြိုင်ပွဲနှင့်ထီများတွင်စိတ်ရောဂါ၊ သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူနှင့်ဆိုင်သောရှုထောင့်များ (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု၊ သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရှုထောင့်များ) ကိုအကဲဖြတ်သည်။
၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကဲဖြတ်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော်လည်း GAS ချိန်ခွင်၏အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း / ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့သည်ကောင်းမွန်သည်။
“ လောင်းကစားသဘောထားနှင့်ယုံကြည်မှုစစ်တမ်း” (GABS)  လောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကောက်ယူမှုများကိုအကဲဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်လောင်းကစားတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာကိုလည်းရရှိသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်မြင့်မားသောရမှတ်ကိုရရှိသောလောင်းကစားသမားများသည်လောင်းကစားခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော၊ လူမှုရေးအရအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့်အနိုင်ရသောနည်းဗျူဟာများအဖြစ်လောင်းကစားသည်။ အဆိုပါ GABS ကောင်းသောပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုနှင့် SOGS နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ convergence တရားဝင်မှုပြသသည်။
“ လောင်းကစားသူ၏ယုံကြည်မှုမေးခွန်းလွှာ” (GBQ)  အထူးသဖြင့်အနိုင်ရသည့်အခွင့်အလမ်းများ (ဥပမာ၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးခြင်းများအကြောင်းယူဆချက်များ) နှင့် ပတ်သက်၍ သိမြင်မှုဆိုင်ရာကောက်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ GBQ သည်မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုကိုပြသသည်၊ သင့်လျော်သောစာမေးပွဲ / ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကောင်းမွန်သော convergence နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သောတရားဝင်မှု၊ ဥပမာ SOGS နှင့် MAGS တို့ဖြင့်ပြသည်။
“ သတင်းအချက်အလက်ဘက်လိုက်မှုစကေး” (IBS)  ကောင်းသောအတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုပြသည့်] အဓိကအားဖြင့်ဗီဒီယိုထီဟုခေါ်သောလောင်းကစားကိုသုံးသောလောင်းကစားသမားများအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုခန့်မှန်းရာတွင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်သက်ဆိုင်ရာသီးခြားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်စွဲစွဲစေသောစွဲလမ်းစေတတ်သောသူအတွက်တွန်းအားကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် (ဥပမာ၊40], ) လောင်းကစားစွဲသူများတွင်“ Gambling Urge Questionnaire” (GUS)  တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်တွေ့အဖြစ်မဟုတ်လက်တွေ့လူ ဦး ရေမှအုပ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်။ GUS သည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊
“ အခြေအနေဆိုင်ရာယုံကြည်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ -၃” (SCQ-39) ၏ထုံးစံ၌42]“ လောင်းကစားကိုယ်ပိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမေးခွန်းလွှာ” (GESQ)  ကွဲပြားသောစွန့်စားမှုအခြေအနေများတွင်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူအပေါ်ပုဂ္ဂလိကထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ GESQ ၏အချက်အလက်များတွင်“ မြင့်မားသောစွန့်စားမှုအခြေအနေများ” (ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ တိုက်တွန်းမှုနှင့်သွေးဆောင်မှုများကိုတွေ့ကြုံခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊  ။ ဤသည် GESQ သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်မှုအတွက်အထူးတန်ဖိုးရှိစေသည်။ GESQ သည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုကိုပြပြီးမြင့်မားသောစမ်းသပ်မှု / ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိန်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
အလွန်အကျွံဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည့်ပထမဆုံးကိရိယာတစ်ခုမှာ“ Compulsive Buying Measurement အတိုင်းအတာ” ဖြစ်သည်။45] ။ စာရေးသူ၏အဆိုအရ၎င်းပစ္စည်းသည်ရောဂါသုံးမျိုး ၀ ယ်ခြင်း၏လေးမျိုးရှုထောင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် - သုံးစွဲရန်၊ ရောင်းရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်း၊ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်အပြစ်ရှိသည်ဟုနှင့်မိသားစုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဆိုလိုသည်။ ယင်း၏အကဲဖြတ်မှုသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုပြသသော်လည်းမြင့်မားသောရမှတ်များကစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်မိသားစုအတွင်း bulimia nervosa၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်အရက်သေစာစသည့် comorbid ရောဂါများမကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ "Hohenheimer Kaufsuchttest [Hohenheim စျေးဝယ်စွဲစမ်းသပ်မှု]"  ပြုပြင်ထားသောဂျာမန်ဗားရှင်းသည်“ Compulsive Buying Measurement Scale”  နှင့်ဤအရပ်ကပုံမှန်နှင့်ရောဂါဗေဒဝယ်လက်များအတူတူလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်ခွဲခြား။ “ Hohenheimer Kaufsuchttest” သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားပြီးခိုင်မာမှုကိုတည်ဆောက်သည်။
စိစစ်ရေးကိရိယာအသစ်သည်“ လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်စျေးဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာစစ်တမ်း”” (SKSK) [“ Erhebung von compensatorischem und süchtigem Kaufverhalten” ဖြစ်သည်။47] ။ စျေးဝယ်ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအလားအလာနှင့်အန္တရာယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ SKSK သည်“ အတင်းအကျပ်ဝယ်ယူမှုတိုင်းတာခြင်းစကေး” အပေါ်အခြေခံသည်။45] နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုမရှိခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံစျေးဝယ်ခြင်း၏သဘောထားကိုအကဲဖြတ်သည့်ပစ္စည်း ၁၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါတူရိယာတစ်ရှုထောင်သည်နှင့်, ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်စေရန်နှင့်အစားထိုးကနေ compulsive ဝယ်အထိရောက်ရှိစဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်သည်။ ၀ ယ်ယူခြင်းသည် ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အလွန်အမင်းလျော်ကြေးပေးခြင်း ၀ ယ်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာလွှဲပြောင်းသောအပြုအမူသည်ပြproblemနာဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်) ကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါတူရိယာမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ features နဲ့တရားဝင်မှုတည်ဆောက်။
နောက်ထပ်စိစစ်သည့်ကိရိယာဖြစ်သော“ Compulsive Buying Scale”  မကြာမီမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းပစ္စည်းများကိုယခင်သုတေသနနှင့်ထိခိုက်ခံရသူများ၏အစီရင်ခံစာမှရရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာဝယ်ယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ တိကျသောခံစားချက်များ၊ စကေးအကဲဖြတ် "Compulsive ဝယ်ယူစကေး" ခိုင်လုံသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတူရိယာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော“ မင်နီဆိုတာ Impulsive Disorder Interview” (MIDI)  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုများကိုအကဲဖြတ်သည်၊ စာရေးသူအဆိုအရ cleptomania, trichotillomania, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, လိင်နှင့်အားကစားအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်မသင်မနေရဝယ်ယူမှုအပါအဝင်, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါများကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ MIDI ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကမဝယ်မဝယ်ဝယ်ဝယ်မျက်နှာပြင်။ ၎င်းတွင်မေးခွန်း ၄ ခုပါ ၀ င်ပြီး၊ အကယ်၍ သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများအားလုံးအဖြေမှန်ဖြေဆိုပါကဘာသာရပ်၏ MIDI မျက်နှာပြင်သည်ဝယ်ယူရန်အပြုသဘောဖြစ်သည် ထိုကိစ္စတွင်နောက်ထပ်ပစ္စည်း ၈၂ အုပ်ကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးရန်အတွက်အကြံပေးသည်။ ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အချက်အလက်မျှမထုတ်ပြန်သေးပါ။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်“ Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale” (Y-BOCS) ,  ကို“ Yale-Brown ဘ ၀ သံသရာမဖြစ်စေရန်သတိပေးသောစကေး - ဈေးဝယ်ဗားရှင်း” (Y-BOCS-SV)  ကိုတီထွင်ရန်ပြင်ဆင်သည်။18] မဝယ်မဝယ်ဝယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ဤအချက် ၁၀ ချက်ပါသောအတိုင်းအတာသည်အချိန်၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာရန်ယင်းကိရိယာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Y-BOCS-SV သည်အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအချင်းချင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပြသသည်။
ခရစ္စတိုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (၂၀၀၃) သည်“ PROMIS စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ” (PROMIS) ၏ပုံစံအတိုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။51]“ ပိုမိုတိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာ” (SPQ) “ PROMIS စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ” ကဲ့သို့သောပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံ (အလုပ်၊ အစားအစာ၊ အားကစား၊ ၎င်း၏ psychometric ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်။ အကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းစွဲအားအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုကြိုတင်လေ့လာခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြုလုပ်သောအင်တာဗျူးဖြစ်သည်။53] နှင့်“ အပြေးနှုန်းအပေါ်ကတိကဝတ်” (CR)  ။ စာရေးသူအချို့55]“ စွဲလမ်းမှု” နှင့်“ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်း” တို့သည်သီးခြားတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြင့် CR ၏အခြေခံသဘောတရားကိုဝေဖန်ခဲ့သည် အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အတားအဆီးများရှိသော်လည်းလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း (သို့) လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများပြသခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးစွဲမှုကိုအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်ဆိုသည့်ယူဆချက်များအရ (ဥပမာ - အလွန်အကျွံလည်ပတ်မှုသည်အပြုသဘော၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အပျက်သဘောဖြစ်သည်)56] Sachs နှင့် Pargman တို့၏အင်တာဗျူးနှင့် CR စိစစ်ရေးကိရိယာများသည်မသင်မနေရလေ့ကျင့်ခန်းကိုအကျင့်ကောင်းတစ်ခုဟုယူမှတ်သည်။ CR သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, "အပျက်သဘောစွဲစကေး" (NAS)  အပြုသဘောဆောင်သောလေ့ကျင့်ခန်းကိုအထူးသဖြင့်အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အပျက်သဘောစွဲလမ်းစေသည်။56] ။ ၎င်း၏ပစ္စည်းများ compulsive ပြေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများမရှိခြင်းကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းကိုပြေးနေခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်ဟုသတ်မှတ်သည့်အမှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးခန့်မှန်းတွက်ချက်။ မရပါ။
“ လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများမေးခွန်းလွှာ”  အချက်လေးချက်အပေါ် အခြေခံ၍ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သောတစ် ဦး ချင်းစီ၏ယူဆချက်ကိုအကဲဖြတ်သည် -“ လူမှုရေးလိုလားမှု”၊ “ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်”၊ “ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှု” နှင့်“ ရောဂါနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုအားနည်းခြင်း” ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော၊
“ လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုမေးခွန်းလွှာ” (EDQ)  compulsive လေ့ကျင့်ခန်း multidimensional ဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်အကဲဖြတ်။ ၎င်းသည်အားကစားလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း။ အတင်းအကျပ်အကဲဖြတ်ရာတွင်အုပ်ချုပ်နိုင်သည်။ ပါဝင်သောအကြေးများမှာ“ လူမှုရေး၊ မိသားစု / လုပ်ငန်းခွင်ဘဝကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း”၊ “ ကောင်းကျိုးရလဒ်”၊ “ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ”၊ “ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိနိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ”“ ပြproblemနာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း”၊ "နှင့်" ကျပုံစံအပြုအမူ "။ စာရေးသူအဆိုအရ EDQ သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးခိုင်လုံသောကိရိယာဖြစ်သည်။
The“ Bodybuilding Dependency Scale” (BDS)  compulsive bodybuilding ကိုအကဲဖြတ်ရန်အထူးသဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီးကျေနပ်အားရလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။ ဤကဏ္subခွဲ (၃) ခုမှာ -“ လူမှုရေးမှီခိုမှု” (တစ် ဦး ချင်းအလေးမမးပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်)၊
“ လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုအင်တာဗျူး” (EXDI)  မစားမသောက်ရလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်အစာစားခြင်းရောဂါများကိုအကဲဖြတ်သည်။ EXDI သည်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလအတွင်းအားကစားလှုပ်ရှားမှုများတွင်အလွန်အကျွံပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ ဆက်စပ်သောအတွေးများ၊ ယင်း၏သက်ရောက်မှုများနှင့်လူတစ် ဦး ၏အစာစားခြင်းအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုများ၊ ယခုအချိန်အထိ၎င်း၏ psychometric ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအဘယ်သူမျှမအကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“ စကေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ကတိကဝတ်” (CES)  ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ - ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသော်လည်းဆက်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများ) နှင့်မသင်မနေရလုပ်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ - လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျော်ပြီးသည့်နောက်တွင်အပြစ်ရှိသည်ဟု) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ CES သည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်ကိုပြသသည်။
“ လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုစကေး” (EDS)  မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအတွက် DSM-IV စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ compulsive လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။27] နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာယုံကြည်စိတ်ချရသောအားဖြင့် - အန္တရာယ်၊ မှီခိုခြင်းနှင့်မှီခိုခြင်းမရှိသောအားကစားသမားများအပြင်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုတို့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
“ လေ့ကျင့်ခန်းစွဲမှတ်စာရင်း” (EAI) ,  သည်အတင်းအကျပ်လေ့ကျင့်ခန်းဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်စစ်ဆေးမှုတိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ EAI သည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ထူးခြားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သောအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊66] ။ EAI သည်မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုနှင့် EDS နှင့် convergence validity ပါရှိသည်။
“ လေ့ကျင့်ခန်း Orientation မေးခွန်းလွှာ”  လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအကဲဖြတ်သည်။ ၎င်းတွင်အချက် ၆ ချက်ပါ ၀ င်သည် -“ ချုပ်တည်းခြင်း”၊ “ လေ့ကျင့်ခန်းကို ဦး တည်ခြင်း”၊ “ မိမိကိုယ်ကိုရွံမုန်းခြင်း”၊ “ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်း၊ ” ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်“ ဝိသေသလက္ခဏာ” ။
workaholism ၏အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားတည်ရှိကတည်းက၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလည်းကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်မေးခွန်းပုံစံများသည်အလွန်ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုများရှိသည်။ ထို့အပြင်ထိုကိရိယာအနည်းငယ်သည်အပြုအမူ၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များကိုခန့်မှန်းရန်စကေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးအကြံပြုထားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
ထို့အပြင်ဤတူရိယာအများစုသီအိုရီအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အဆိုပြုထားကြသည်မဟုတ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ပင်ကိုယ်မူလခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်အားနည်းချက်ရှိသည်။68],  ။ Mentzel  workaholism ကိုအရက်သောက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီး Jellinek ၏အရက်သောက်ခြင်းအတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံနှုန်းများကိုအသုံးပြုသည်။71] ။ Mentzel ၏ကိရိယာသည်ထိခိုက်နစ်နာသူတစ် ဦး အားသူ၏အပြုအမူကိုထင်ဟပ်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများစာရင်းသာဖြစ်သည် (cf.72]) ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ psychometric ဝိသေသလက္ခဏာများအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
“ အလုပ်သဘောထားမေးခွန်းလွှာ” (WAQ) “ အလုပ်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်” နှင့်အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောစိတ်သဘောထားနှင့်အပြုအမူပုံစံများပါ ၀ င်သည့်အကြေးခွံနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ စာရေးသူအဆိုအရ workaholism သည်အလုပ်အပေါ်အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်အားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကအာရုံစိုက်မှုမှမဟုတ်ဘဲစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများမှဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ “ အလုပ်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်” စကေးသည်အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အပြုအမူအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားများကိုအကဲဖြတ်သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံသူများကိုအလုပ်အတွက်ကတိကဝတ်နိမ့်သူများနှင့်ခွဲဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒုတိယ“ ကျန်းမာရေးစကေး” ဟုခေါ်သောအလုပ်အပေါ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောသဘောထားကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ စုစုပေါင်းရမှတ်နှစ်ခုအကြေးခွံ၏ရမှတ်များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ WAQ သည်အလုပ်များရန်နှင့်အလုပ်များရန်အလွန်အမင်းကတိကဝတ်ပြုထားသူများအကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးရှိသောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကိုအလုပ်အားဖြင့်စိန်ခေါ်မှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောစိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြုအမူပုံစံများမြင့်မားစွာကတိကဝတ်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ၀ န်ထမ်းများ၏စိတ် ၀ င်စားမှု၊ ထို့ကြောင့်စာရေးသူကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော workaholics ခွဲခြား။ ယခုအချိန်အထိဤတူရိယာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။
“ Workaholism ဘက်ထရီ” (WorkBAT) “ အလုပ်ပါ ၀ င်မှု”၊ “ မောင်းနှင်မှု” အပြင်“ အလုပ်ပျော်မွေ့ခြင်း” သည်ချိန်ခွင်သုံးမျိုးပါဝင်သည်။ WorkBat သည်စိတ်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ လုံလောက်သောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပေါင်းစည်းခြင်းတရားဝင်မှုကိုပြသသည်။ “ WorkBAT-R”  သည်“ Workaholism Battery” ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။74] ။ ၎င်း၏စာရေးသူများကသူတို့၏တူရိယာတွင်အခြေခံအချက် (၃) ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊74] အချက်နှစ်ချက်၏တည်ရှိမှုကိုသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအလွန်ကောင်းမွန်သည့်“ ပျော်စရာ” (အလုပ်တွင်) နှင့်“ မောင်းနှင်မှု” (အလုပ်လုပ်ရန်) ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ anankastic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့် workaholism သည်ဆက်စပ်နေသည့်ရောဂါများဖြစ်သည်၊ “ လိုက်လျောညီထွေမရှိသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Workaholism စကေး” (SNAP-Work)  ကိုတီထွင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်လက်မခံနိုင်သော၊ SNAP-Work သည်အတွင်းပိုင်းရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအပိုင်းပိုင်းခွဲစိတ်ချရမှုကိုပြသခဲ့သည်။
Mudrack နှင့် Naughton77]“ မလိုအပ်သောအလုပ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်လိုသည့်သဘောထား” (ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုအချိန်စဉ်းစားခြင်း) နှင့်“ အခြားသူများ၏အလုပ်အပေါ်တက်ကြွစွာကျူးကျော်ခြင်း” ကိုခန့်မှန်းသည့်တူရိယာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အခြားသူများကိုတာဝန်ယူပြီးအပေါ်) ။ ၎င်းကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ၏အလုပ်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင်ညှိနိုင်သည်။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။
ကွန်ပျူတာစွဲမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောလက်ရှိကိရိယာများသည်အများအားဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲလမ်းမှုများ၏ရောဂါရှာဖွေရေးစံနှုန်းများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ကွန်ပျူတာစွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာပြရှုပ်ထွေးမှုကိုကန ဦး ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌ဗွီဒီယိုဂိမ်းများအလွန်အကံျွကစားခဲ့ကြသောကြောင့်ကန ဦး သတင်းပို့ခဲ့ကြသောကြောင့်တူရိယာအများစုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ “ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ကွန်ပျူတာအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း” ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဆက်စပ်မှုနှင့်လူအများဆွေးနွေးမှုများကြောင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောတူရိယာများစွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ထဲကအနည်းငယ်ကဒီမှာမိတ်ဆက်ကြသည်။
ဂရစ်ဖစ်  ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်လောင်းကစားခြင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သော DSM-III-R စံသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ဂိမ်းစက်စွဲမှုကိုရည်ညွှန်း။ အလွန်အမင်းဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည် 26] ။ အနည်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်လေးခုကိုပြည့်မီလျှင်အပြုအမူကိုစွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်သည်။ စကေးအကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ရှိပါတယ်။
DSM-IV-JV (J = Juvenile, V = Arcarde ဗီဒီယိုဂိမ်း)  မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ရောဂါဗေဒဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်စိတ်ချရသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ DSM-IV (APA) ကိုအခြေခံသည်။27] ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်စံ။ အကယ်၍ အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ချက် ၄ ခုနှင့်ကိုက်ညီပါကကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းကိုရောဂါရှာဖွေနိုင်သည်။
“ ပြProbleနာရှိသောဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းစကေး” (PVB)  မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်) အတွင်းပြaticနာရှိသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစွာအကဲဖြတ်သည်။
မူလတန်းကျောင်းမှကလေးများကွန်ပြူတာဂိမ်းစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် Chiu, Lee နှင့် Huang “ ဂိမ်းစွဲလမ်းမှု” နှင့်“ ဂိမ်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း” တို့ကိုခွဲခြားပေးသော“ ဂိမ်းစွဲလမ်းမှုစကေး” ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသေးထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
လူကြီးများအတွက်“ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း” ကိုပြင်ဆင်ခြင်း “ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူဆိုင်ရာစာရင်း” (CRABI)  ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ CRABI ၏စိတ်ချရမှုသည်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
ကလေးများအတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအပြုအမူကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုမှာ“ ကလေးများအတွက်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအပြုအမူဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ” (CSVK) သည်“ Fragebogen zum Computerspielverhalten bei Kindern” ဖြစ်သည်။84] ။ CSVK သည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (DSM-IV) အရရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုရည်ညွှန်း။ ဂျာမန်စကားပြောနယ်မြေအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။2] နှင့် ICD-10 ) ။ ၎င်းသည်“ အလွန်အကျွံကွန်ပျူတာကစားခြင်း” ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်“ မိသားစုနှင့်နေထိုင်မှု”၊ “ အားလပ်ချိန်နှင့်မိတ်ဆွေများ”၊ “ ကျောင်း” နှင့်“ ရုပ်မြင်သံကြားစားသုံးမှု” စသည့်ဆက်စပ်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လူမှုရေးလက်ခံမှုနှင့်ပြpreferredနာဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးသည်။ ယခင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ "ရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်" အတိုင်းအတာအရပစ္စည်းခုနစ်ခုစလုံးကိုအချက်တစ်ခုတည်းအဖြစ်လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ ကိရိယာသည်တိကျသော၊ အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပြသနိုင်သည်။ CSVK ပစ္စည်းများထပ်မံအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောဆန်းစစ်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်သင့်သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင်အင်တာနက်၏လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာပစ္စည်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါ (APA) အတွက် DSM-IV စံသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။27] ။ လက်တွေ့တွင်ကွန်ပြူတာနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသောဘုံအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လုံလောက်သောရောဂါရှာဖွေခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာ ၂ ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်နှင့်ကွန်ပျူတာစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုအကဲဖြတ်သည့်တူရိယာများအသုံးပြုခြင်းလည်းပါဝင်သင့်သည်။
Egger နှင့် Rauterberg  ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောရောဂါများကိုအကဲဖြတ်သည့် DSM-IV စံညွှန်းအပေါ် အခြေခံ၍“ Online-Internetsucht-Fragebogen” [အွန်လိုင်းအင်တာနက်စွဲမေးခွန်းလွှာ] ကိုတီထွင်ခဲ့သည် 27] ။ ၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်အတည်မပြုရသေးပါ။
တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုခန့်မှန်းရန်ပစ္စည်း ၃၂ ခုပါ ၀ င်သည့်အခြားကိရိယာတစ်ခုကိုမကြာသေးမီကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤကိရိယာသည်“ အင်တာနက်နှင့်ဆက်နွယ်သောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူဆိုင်ရာစာရင်း” (IRABI)  စိတ်ကျေနပ်မှု၏ကျေနပ်ဖွယ်အဆင့်ကိုပြသ။
ထို့အပြင်“ Internetsuchtskalen [အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစကေး]” (ISS)  အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောစွဲလမ်းမှုကင်းမဲ့သည့်အင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ - ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ၊ သည်းခံမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးများနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးများနှင့်ပတ်သက်သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသော်ငြားအလွန်အကျွံအပြုအမူများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း) ကိုသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဂျာမန်စာချုပ်တစ်ခု။ ရောဂါရှာဖွေရေးများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
အခွားအကဲဖြတ်သူများသည် DSM-IV ၏ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၏ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်ကိုအလေးထားသည်။ “ Diagnostic Questionnaire” (YDQ)  - ပြင်ဆင်ထားသောမူကွဲတွင် -“ ပြproblemနာမရှိသောအင်တာနက်သုံးစွဲမှု”၊ “ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမကြာခဏပြproblemsနာများ” နှင့်“ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလေးနက်သောပြproblemsနာများ” ကိုပစ္စည်း ၂၀ ခန့်နှင့်ခွဲခြားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွင်ခိုင်လုံသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက် (၆) ချက်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည် -“ အဓိကကျခြင်း”၊ “ အလုပ်လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ” လူမှုရေးဘဝကိုလျစ်လျူရှုခြင်း၊ “ အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း”၊ “ မျှော်လင့်ခြင်း” နှင့်“ ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်း” ။
မကြာသေးမီကပင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှကိရိယာများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခု “ ပြproblemနာအမူအကျင့်၊ ခက်ခဲသောအင်တာနက်သုံးစွဲသူ”၊ “ ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း”၊ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု / ရှက်ရွံ့မှု / မိတ်ကပ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း” နှင့်“ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိခြင်း” အကြောင်းအချက်လေးချက်အပေါ်အခြေခံသည်။
“ ယေဘူယျပြProbleနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုစကေး” (GPIUS) “ ယေဘူယျပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှု” ၏သီအိုရီအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံသည်။90] ။ ဤအစီအစဉ်တွင်“ စိတ်ပြောင်းခြင်း”၊ “ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်လူမှုအကျိုးခံစားခွင့်များ”၊ “ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများ”၊ “ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း”၊ “ အွန်လိုင်းမှာအချိန်များစွာသုံးခြင်း”၊ အင်တာနက်” အပြင်“ ရရှိနိုင်တဲ့လူမှုထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်” ။ GPIUS ၏ subscales များသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းတို့နှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ စာရေးသူအဆိုအရ GPIUS သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးခိုင်လုံသောကိရိယာဖြစ်သည်။
The“ Online Cognition Scale” (OCS)  အထူးသဖြင့်အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမှတ်ခံစားမှုများကိုအထူးအလေးထားပြီးရှုထောင့်လေးခုပါ ၀ င်သည်။ - "လျော့နည်းသွားသောဒေါသစိတ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု"၊ "အထီးကျန်မှု / စိတ်ဓာတ်ကျမှု"၊ "လူမှုသက်သာမှု" နှင့် "အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်း" ။ အဆိုပါ OCS ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပေါ်လာသည်။
“ အင်တာနက်ပြaticနာအားစစ်ဆေးခြင်းအတွက်နမူနာမေးခွန်းများ” [ ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ဝက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၏အဓိကအပိုင်းငါးခု (ပြproblemနာကိုတင်ပြခြင်း၊ ဇီဝဗေဒ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးနယ်ပယ်အသီးသီး၊ ပြန်လည်အသက်ဝင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း) သည်ဇီဝလူမှုဗေဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုမှရရှိသည်။93] ။ ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုသက်သေပြရန်မရှိသေးပါ။
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းယခုအချိန်အထိဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အကဲဖြတ်အတွက်ခိုင်လုံသောတူရိယာရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုအရေအတွက်သတ်မှတ်ခြင်း (ဥပမာ၊93]) သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကြိမ်ရေခန့်မှန်းချက်  ရောဂါ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သည်းခံမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည့်သက်ဆိုင်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရှုထောင့်များကိုရရှိရန်အထောက်အကူမပေးပေ။
ယခုအချိန်ထိလိင်စွဲမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း95] လိင်စွဲလမ်းမှုကိုခန့်မှန်းရန်တစ်ခုတည်းသောရရှိနိုင် ဒီစမ်းသပ်မှု (အခြားစိစစ်ရေးကိရိယာများကဲ့သို့) သည်ရှုပ်ထွေးသောလက္ခဏာများရှုပ်ထွေးမှုရှိကြောင်းအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတိုတောင်းသော (၂၄ ခု) နှင့်ရှည်လျားသော (၁၈၄ ခု) ဗားရှင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ ဗားရှင်းအတိုသည်လိင်စွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်ချေကိုဖော်ပြရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်အဖြေ ၁၃ ခုလိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသောမှတ်ချက်တစ်ခုအရလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအားစစ်ဆေးမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်မပြုရသေးပါ။
အမျိုးမျိုးသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုး (ဥပမာ - ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ အလုပ်များခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း) ကိုပြည့်စုံစွာနှင့်စံသတ်မှတ်ထားသောအကဲဖြတ်မှုအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးချဉ်းကပ်နည်းသည်ဂျာမန်ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာဖြစ်သည်။ အပြုအမူများ)  ။ FDAV သည် ICD-10 ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပြsubstanceနာများအပေါ်အခြေခံသည်။3] နှင့် DSM-IV-TR 2].
FDAV သည်ပြုပြင်ထားသော“ Fragebogen zur Differenzierten Drogenanamnese” (FDDA၊ ကွဲပြားခြားနားသောအကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်မေးခွန်းလွှာ၊ QDAA) ၏ပြုပြင်ထားသောပုံစံဖြစ်သည်။97] ။ ယင်း၏ module ၇ ခုသည်“ sociodemographic သတင်းအချက်အလက်” (ဥပမာ၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ)၊ “ အလွန်အကျွံအပြုအမူသမိုင်း” (ဥပမာ - စွဲလမ်းမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုရောဂါအတွက်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်၊ "(စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု)" ဥပဒေရေးရာအခြေအနေ "," ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်း "," ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုများ "နှင့်" စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ "(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ, သို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်, အသီးသီး) ။ module တစ်ခုချင်းစီကိုအပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်အညီသီးခြားစီစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး FDAV သည်အမူအကျင့်စွဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံး ၀ င်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ FDAV သည်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများနှင့်သုတေသနများတွင်ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုထုံးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအတွက်သင့်တော်သည်။ လောလောဆယ် FDAV သည်လက်တွေ့နှင့်လက်တွေ့မဟုတ်သောနမူနာများတွင်အတည်ပြုထားသည်။
Grüsserနှင့် Thalemann  လက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုး၏သက်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စာရေးသူများအနေဖြင့်ဤလက္ခဏာများကိုအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှု၏ရောဂါလက္ခဏာပြရန်အရိပ်အမြွက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကအလေးအနက်ထားသည်မှာအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှုအားတားဆီးရန်အမှုတစ်ခုချင်းစီကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူသည်စွဲလမ်းမှု (သို့) အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကို (ရောဂါဗေဒမဟုတ်သော၊ ရောဂါများ) ။
Grüsserနှင့် Thalemann အရအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများ  ပါဝင်သည်:
အပြုအမူကို (၁၂ လ) အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်လွန်ကဲကဲ၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲသာမန်ထက်လွန်လွန်ကဲကဲ (ဥပမာ၎င်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍) ပြသသည်။
အပြုအမူစတင်သောအခါအလွန်အကျွံအပြုအမူ (ကြာချိန်, ကြိမ်နှုန်း, ပြင်းထန်မှု, အန္တရာယ်) ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှု
သည်းခံမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အပြုအမူကိုပိုမိုကြာကြာပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သည်၊ မတူကွဲပြားသောပုံစံ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်အကြိမ်ရေတွင်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်လာခြင်းမရှိ။ )
Function (အပြုအမူသည်အဓိကအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုများ / ခံစားချက်များကိုထိန်းညှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်)
အကျိုးသက်ရောက်မှု (အလွန်အကျွံအပြုအမူများလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သာယာသော / အပြုသဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများ၏မျှော်မှန်းချက်)
အလွန်အကျွံအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များ၏ဆင်ခြင်တုံတရား, contorted အမြင်
အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ (ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေး) ကြားမှအလွန်အကျွံအပြုအမူများဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း
အခြေအနေ / သင်ယူမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ (အလွန်အကျွံအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့မှုမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံအပြုအမူနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်များမှဖြစ်ပေါ်လာခြင်း)
အဆိုပါလက်တွေ့အမြင်အဖြစ်သိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တိုးမြှင့်ငွေပမာဏအသီးသီးပစ္စည်းဥစ္စာ -related နှင့် Non- ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဆက်စပ်သောအမူအကျင့်စွဲ၏တူညီသောအလေးပေး။ ထို့ကြောင့်, စိတ်ရောဂါ၏စံချိန်စံညွှန်းခွဲခြားမှုစွဲရောဂါအဖြစ်စွဲ၏စံတွေ့ဆုံအလွန်အကျွံအပြုအမူတွေကိုခွဲခြားနှင့်ရောဂါရှာဖွေစံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်အညီသူတို့ကို operating ။ သို့မှသာတိကျမှန်ကန်သောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှု (ခိုင်လုံသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်) ထိရောက်သောကုသမှုခံယူရန်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်။
1. Kellermann B. Glücksspielsucht aus psychiatrischer Sicht ။ In: အယ်ဒီတာ Fett A ။ Glück-Spiel-Sucht Freiburg: Lambertus; 1996 စစ။ 23-35 ။
2. Saß H, Wittchen HU, Zaudig M, Houben I. Diagnostisches und Statistisches လက်စွဲစာအုပ်စိတ်ပညာရှင်Störungen (DSM-IV-TR) Göttingen: Hogrefe; 2003 ။
3. Dilling H ကို, Mombour W, Schmidt က MH ။ စိတ်ပညာရှင်Störungen: ICD-10၊ Kapitel V (F)၊ Leitlinien ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။ Weltgesundheitsorganisation ။ Bern: Huber၊ 2000 ။
4. Böning J. Psychopathologie und Neurobiologie der“ Glücksspielsucht” ခုနှစ်တွင်: အယ်လ်ဘက်တီ, G, Kellermann B, အယ်ဒီတာများ။ Psychosoziale Aspekte der Glücksspielsucht။ Geesthacht: Neuland; 1999 ။
၅။ Holden C. “ အမူအကျင့်” စွဲလမ်းမှု - သူတို့တည်ရှိနေသလား။ သိပ္ပံ 5; 2001: 294-980 ။ [PubMed]
6. Marks ဗြဲအမူအကျင့် (ဓာတုမဟုတ်သော) စွဲ။ Br J ကိုစွဲ။ 1990; 85: 1389 ။ [PubMed]
7 ။ Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006; 101: 142-151 ။ [PubMed]
8. Grüsser SM၊ Nervenarzt ။ ပထမ ဦး ဆုံး 2007 အွန်လိုင်း။ [PubMed]
9. Grüsser SM, Thalemann CN ။ Verhaltenssucht- Diagnostik, ကုထုံး, Forschung ။ Bern: Huber၊ ၂၀၀၆ ။
အပြုအမူမှီခိုမှု၏ ၁၀။ Lejoyeux M၊ McLoughlin M၊ Adès J. ကူးစက်ရောဂါ - စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်မူလလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များ။ Eur စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 10; 2000: 15-129 ။ [PubMed]
၁၁။ Petry J. Glücksspielsucht: Entstehung၊ Diagnostik und Behandlung ။ Göttingen: Hogrefe; 11 ။
12. Blanco C၊ Moreyra P၊ Nunes EV၊ Saiz-Riuz J၊ Ibáñez A. ရောဂါဗေဒလောင်းကစား - စွဲခြင်းလော။ Semin Clin Neuropsychiatry ။ 2001; 6: 167-176 ။ [PubMed]
13. Petry NM, Casarella T. လောင်းကစားပြproblemsနာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သူများအတွက်နှောင့်နှေးနေသောဆုလာဘ်များအလွန်အကျွံလျှော့စျေး။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်ပေါ်မူတည်။ 1999; 56: 25-32 ။ [PubMed]
14. Grüsser SM, Albrecht U. Rien ne va plus ။ Wenn Glücksspiele Leiden schaffen ။ Bern: Huber၊ 2007 ။
15. Grüsser SM, Plöntzke B, Albrecht U. Pathologisches Glücksspiel - eine empirische Untersuchung des Verlangens nach einem stoffungebundenen Suchtmittel ။ Nervenarzt ။ 2005; 76: 592-596 ။ [PubMed]
16. Rosenthal RJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများအတွက် DSM-IV စံဖြန့်ဖြူး။ မှတ်ချက်များ။ စွဲ။ 2003; 98: 1674-1675 ။ [PubMed]
၁၇။ Steenbergh T, Meyer A၊ မေ R၊ Whelan J. Development နှင့်လောင်းကစားသမားများ၏ယုံကြည်မှုမေးခွန်းလွှာကိုအတည်ပြုခြင်း။ Psychol စွဲလမ်း Behav ။ 17; 2002: 16-143 ။ [PubMed]
18. Monahan P, Black DW, Gabel J. ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ဝယ်ယူမှုရှိသူများပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာရန်အတိုင်းအတာ၏တရားဝင်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1996; 64: 59-67 ။ [PubMed]
19. Potenza MN ။ လောင်းကစား: ကျန်းမာရေးနှင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ။ J ကိုဗိုလ်ချုပ် Intern က Med ။ 2002; 17: 721-732 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၂၀။ Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand Y, Glascher J, Büchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 20; 2005: 8-147 ။ [PubMed]
21 ။ Crockford DN, Goodyear B, Edwards က J ကို, Quickfall J ကို, El-Guebaly N. Cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေပါ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 787-795 ။ [PubMed]
22. Grant JE, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: ကုသမှုတစ်ခုလက်တွေ့လမ်းညွှန်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုထုတ်ဝေရေး၊ ဝါရှင်တန်၊ ၂၀၀၄ ။
ပြSharနာလောင်းကစား၏ 23. Sharpe အယ်လ်တစ် ဦး က reformulated သိမြင် - အပြုအမူပုံစံ။ တစ် ဦး က biopsychosocial ရှုထောင့်။ Clin Psychol ဗျာ 2002; 22: 1-25 ။ [PubMed]
လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းတွင် Toneatto T၊ Blitz-Miller T၊ Calderwood K၊ Dragonetti R၊ Tsanos A. သိမှုဆိုင်ရာပုံပျက်မှုများ။ J ကို Gambl လုံး။ 24; 1997: 13-253 ။ [PubMed]
25. Lesieur H ကို, Blume အက်စ် The South Oaks လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (SOGS): ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများဖော်ထုတ်များအတွက်အသစ်တခုတူရိယာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1987; 144: 1184-1188 ။ [PubMed]
26. အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ 3rd ed ။ rev ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ; 1987 ။
27. အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ 4th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ; 1994 ။
၂၈။ Ferris J, Wynne H. ကနေဒါပြProbleနာလောင်းကစားအညွှန်း - အသုံးပြုသူလက်စွဲ။ တိုရွန်တို (ON) - ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာကနေဒါနိုင်ငံ၊ ၂၀၀၁ ။
29. Shaffer HJ, LaBrie R, Scanlan KM, Cummings TN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားရောဂါဗေဒလောင်းကစား: မက်ဆာချူးဆက်လောင်းကစားမျက်နှာပြင် (MAGS) J ကို Gambl Stud ။ 1994; 10: 339-362 ။ [PubMed]
30. Selzer ML, Vinokur A, van Rooijen L. တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်မီချီဂန်အရက်ယမကာစိစစ်ခြင်း (SMAST) J Stud အရက်။ 1975; 36: 117-126 ။ [PubMed]
31. Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA, Mazure C, Fleischman RL, Hill CL ။ Yale-Brown ဘ ၀ သံသရာ - ငါ။ ဖွံ့ဖြိုးရေး, အသုံးပြုမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989; 46: 1006-1011 ။ [PubMed]
၃၂. Hollander E၊ DeCaria CM, Mari E, Wong CM, Mosovich S, Grossman R, Begaz T. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုကာလတိုတစ်ခုတည်းမျက်စိကန်းသော fluvoxamine ကုသမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 32; 1998: 155-1781 ။ [PubMed]
33. Gerstein DR, Volberg RA, Harwood R, Christiansen EM ။ လောင်းကစားခြင်းသက်ရောက်မှုနှင့်အပြုအမူလေ့လာခြင်း။ ချီကာဂို, အီလီနွိုက် - National Opinion Research Center၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်; 1999 ။
34. Johnson E, Hamer R, Nora R. အဆိုပါရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများကိုစိစစ်ဘို့မုသား / အလောင်းအစားမေးခွန်းလွှာ: နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1998; 83: ။ 1219-1224 ။ [PubMed]
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားသမားများအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်ဂျွန်ဆင်အီး၊ ဟာမမ် R၊ Nora R၊ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 35; 1997: ။ 80-83 ။ [PubMed]
36. Grant JE, Steinberg MA၊ Kim SW, Rounsaville BJ, Potenza MN ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဘို့စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး၏ပဏာမတရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2004; 128: 79-88 ။ [PubMed]
လောင်းကစားစိတ်ဓာတ်၏ကက်ဆီနိုဂျေဖွံ့ဖြိုးရေး - ပဏာမတွေ့ရှိချက်များ။ J ကို Clin Psychol ။ 37; 1998: 54-763 ။ [PubMed]
လောင်းကစားအပြုအမူအတွက် 38. Breen R ကို, Zuckerman အမ် Chasing: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သိမြင်ဆုံးအဖွတျ။ Pers Individ Dif ။ 1999; 27: 1097-1111 ။
39. ဂျက်ဖာဆန် S၊ နီကီ R. ဗီဒီယိုထီ terminal terminal အသုံးပြုသူများအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပုံပျက်ပုံများကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာအသစ် - သတင်းအချက်အလက်ဘက်လိုက်မှုစကေး (IBS) J Gambl Stud ။ 2003; 19: 387-403 ။ [PubMed]
40. Tiffany ST, Conklin CA. အရက်တပ်မက်ခြင်းနှင့် compulsive အရက်သုံးစွဲမှု၏တစ် ဦး သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်။ စွဲ။ 2000; 2: 145-153 ။ [PubMed]
41 Namrata R ကို, Oei TPS ။ အဆိုပါလောင်းကစားတိုက်တွန်းမှုစကေး: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အတည်ပြုအချက်အတည်ပြုခြင်းနှင့် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychol စွဲလမ်း Behav ။ 2004; 18: 100-105 ။ [PubMed]
42 Annis HM, ဂရေဟမ် JM ။ အခြေအနေဆိုင်ရာယုံကြည်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ (SCQ-39): အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်။ တိုရွန်တို - စွဲသုတေသနသုတေသန၊ 1988 ။
43. မေလ R, Whelan J, Steenbergh T, Meyers A. လောင်းကစားကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုမေးခွန်းလွှာ - ကန ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်။ J ကို Gambl လုံး။ 2003; 19: 339-357 ။ [PubMed]
44 Marlatt GA ။ relapse နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု - လေ့ကျင့်ရေးကြားဝင်၏အခြေအနေဆုံးအဖွတျ။ ခုနှစ်တွင်: အယ်လ်အယ်ဒီတာ Marlatt GA, ဂေါ်ဒွန် JR ။ relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး - စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုကုသရာတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းဗျူဟာများ။ နယူးယောက်၊ 1985 စစ။ 71-127 ။
45. Valence G, D'Astou A၊ Fortier L. မငြိမ်မသက်ဝယ်ယူမှု - အယူအဆနှင့်တိုင်းတာမှု။ J ကို Consum Behav ။ 1988; 11: 419-433 ။
46. ​​Scherhorn, G, Reisch LA က, အနောက်ဂျာမနီမှာစွဲလမ်း Raab G. အ: တစ်ခုပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှု။ J Consum ပေါ်လစီ။ 1990; 13: 699-705 ။
47. Raab, G, Neuner M, Reisch LA, Scherhorn G. အ SKSK-Screeningverfahren zur Erhebung von compensatorischem und süchtigem Kaufverhalten ။ Göttingen: Hogrefe; ၂၀၀၅
48. Faber RJ, O'Guinn TC ။ compulsive ဝယ်ယူများအတွက်လက်တွေ့ Screener ။ J ကို Consum Res ။ 2005; 19: 459-469 ။
et al 49. Christenson GA, Faber RJ, de Zwaan M, Raymond NC, Specker SM, Ekern MD ။ မသင်မနေရဝယ်ယူမှု: ဖော်ပြရန်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 55: 5-11 ။ [PubMed]
50. Goodman WK၊ LH၊ Rasmussen SA, Mazure C, Delgado P, Heninger GR, Charney DS ။ Yale-Brown ဘ ၀ င်မတက်ကြွနိုင်သောစကေး -၂ ။ တရားဝင်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989; 46: 1012-1016 ။ [PubMed]
51. Lefever R. စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း။ London: PROMIS ထုတ်ဝေမှု၊ 1988 ။
52. Christo G၊ Jones SL, Haylett S, Stephenson က GM, Lefever RM, Lefever R. တိုတောင်းသော PROMIS မေးခွန်းလွှာ - စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူမျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအကဲဖြတ်ရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုအားနောက်ထပ်အတည်ပြုခြင်း။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 2003; 28: 225-248 ။ [PubMed]
53. Sachs ML, Pargman A နက်ရှိုင်းသောအင်တာဗျူးစာမေးပွဲ။ J ကိုအားကစား Behav ။ 1979; 2: 143-155 ။
54. Carmack MA, Martens R. အပြေးပြိုင်ပွဲတိုင်းတာခြင်း - အပြေးသမားများ၏သဘောထားနှင့်စိတ်အခြေအနေများကိုစစ်တမ်းတစ်ခု။ Int J အားကစား Psychol ။ 1979; 1: 25-42 ။
55. Chapman CL, De Castro JM ။ Running စွဲ: တိုင်းတာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကိုအားကစား Med Phys ကြံ့ခိုင်ရေး။ 1990; 30: 283-290 ။ [PubMed]
56 Glasser ဒဗလျူအပြုသဘောဆောင်။ နယူးယောက်: Harper & Row; 1976 ။
57. Hailey BJ, Bailey LA ။ အပြေးသမားများအတွက်အပျက်သဘောစွဲလမ်းမှု: အရေအတွက်ချဉ်းကပ်မှု။ J ကိုအားကစား Behav ။ 1982; 5: 150-154 ။
58. Loumidis KS, Wells A. လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုအပေါ်ယုံကြည်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ လေ့ကျင့်ခန်းယုံကြည်မှုမေးခွန်းလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပဏာမအတည်ပြု။ Pers Individ Dif ။ 1998; 25: 553-567 ။
59. Ogden J, Veale D, Z. ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုမေးခွန်းလွှာ၏အတည်ပြုချက်ကို Summers ။ စွဲစွဲသူ 1997; 5: 343-356 ။
60. Smith DK, Hale BD, Collins D. ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုအားတိုင်းတာသည်။ J ကိုအားကစား Med Phys ကြံ့ခိုင်ရေး။ 1998; 38: 66-74 ။ [PubMed]
61. Bamber D, Cockerill IM, Rodgers S, ကာရိုး exercise လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှု၏ရောဂါဗေဒအခြေအနေ။ Br J အားကစား Med ။ 2000; 34: 125-132 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62. Davis C, Brewer H, Ratusny D. အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအကြိမ်ရေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတိကဝတ် - အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းများလေ့လာခြင်းတွင်လိုအပ်သောသဘောတရားများ။ J ကို Behav Med ။ 1993; 16: 611-628 ။ [PubMed]
63. Hausenblas HA, Symons Down much ဘယ်လောက်ကျသင့်လဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းမှီခိုမှုစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတည်ပြု။ Psychol ကျန်းမာရေး။ 2002; 17: 387-404 ။
64. Terry A, Szabo A, Griffiths အမ်။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းထပ်ဆောင်းစာရင်း - အကျဉ်းချုပ်စိစစ်ရေးကိရိယာအသစ်။ စွဲ Res သီအိုရီ။ 2003; 12: 489-499 ။
65. Griffiths MD, Szabo A, Terry A. လေ့ကျင့်ခန်းစွဲစာရင်း - ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်သူများအတွက်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောစစ်ဆေးမှုကိရိယာတစ်ခု။ Br J အားကစား Med ။ 2005; 39: e30 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66. Griffiths က MD ။ ကလေးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ကွန်ပျူတာကစားခြင်း - စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Gill T က, အယ်ဒီတာ။ အီလက်ထရောနစ်ကလေးများ - သတင်းအချက်အလက်တော်လှန်ရေးကိုကလေးများဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေသလဲ။ လန်ဒန် - အမျိုးသားကလေးဗျူရို၊ 1996 စစ။ 41-58 ။
ကျားမနှင့်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု: ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း orientation ကို 67. Yates A, Edman J ကို, Crago M က, Crowell: D, Zimmerman R. တိုင်းတာခြင်း။ Pers Individ Dif ။ 1999; 27: 199-209 ။
68. Burke RJ၊ Richardsen AM, Spence ၏မာတင်နပ်စ်အမ်စိတ်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် workaholism အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် Robbins ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 2002; 91: ။ 1098-1104 ။ [PubMed]
69 Poppelreuter အက်စ် Arbeitssucht ။ Weinheim: Beltz; 1997 ။
70. Mentzel G. အÜberသေ Arbeitssucht ။ Z ကို Psychosom Med Psychoanal ။ 1979; 25: 115-127 ။ [PubMed]
71 Jellinek EM ။ အရက်၏ရောဂါအယူအဆ။ New Haven: ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှစာနယ်ဇင်း၊ 1960 ။
72. Rohrlich ဂျေ Arbeit und Liebe ။ Frankfurt: Fischer၊ ၁၉၈၄ ။
73 Doty က MS, Betz NE ။ အလုပ်သဘောထားမေးခွန်းလွှာအတွက်လမ်းညွှန်။ ကိုလံဘတ်စ် - မာရသွန်အတိုင်ပင်ခံနှင့်သတင်းစာ၊ 1981 ။
74 Spence J ကို, Robbins အေ Workaholism ။ အဓိပ္ပါယ်, တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပဏာမရလဒ်များကို။ J Pers Assessment ။ 1992; 58: 160-178 ။ [PubMed]
75. McMillan LHW, Brady EC၊ O'Driscoll အမတ်များ၊ Marsh NV ။ Spence နှင့် Robbins တို့၏ဘက်စုံစစ်ဆေးခြင်း (၁၉၉၂) Workaholism Battery ။ Organ ကို Psychol Occup ။ 1992; 2002: 75-357 ။
လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်အချိန်ဇယားများအတွက် 76. Clark က C. လက်စွဲစာအုပ်။ Minneapolis: မင်နီဆိုတာစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 1993 ။
77. Mudrack PE, Naughton TJ အပြုအမူသဘောထားများအဖြစ် workaholism ၏အကဲဖြတ်: စကေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပဏာမပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်။ Int J ကိုစိတ်ဖိစီးမှု Manag ။ 2001; 8: 93-111 ။
78. ဂရစ်ဖစ်အမ် Pinball wizard: တစ် pinball စက်စွဲ၏အမှု။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1992; 71: ။ 160-162 ။ [PubMed]
79. Fisher S. ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 1994; 19: 545-553 ။ [PubMed]
80 Salguero RAT, Morán RMB ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ကစားခြင်းပြproblemနာဗီဒီယိုဂိမ်းတိုင်းတာသည်။ စွဲ။ 2002; 97: 1601-1606 ။ [PubMed]
81. Chiu SI, Lee JZ, Huang DH ။ ထိုင်ဝမ်ရှိကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်း။ Cyberpsychol Behav ။ 2004; 7: 571-581 ။ [PubMed]
82. လူငယ်ကေ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု - လက်တွေ့ရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ Cyberpsychol Behav ။ 1998; 1: 237-244 ။
83. ယန် CK ။ ကွန်ပျူတာများကိုပိုလျှံရန်အသုံးပြုသောမြီးကောင်ပေါက်များ၏လူမှုဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ Acta စိတ်ရောဂါ Scand ။ 2001; 104: 217-222 ။ [PubMed]
84. Grüsser SM, Thalemann R, Albrecht U, Thalemann CN ။ Exheessive Computernutzung im Kindesalter- Ergebnisse einer psychometrischen Erhebung ။ Wien ကလင်း Wochenschr ။ 2005; 117: 188-195 ။ [PubMed]
85. Egger O, Rauterberg အမ်အင်တာနက်အပြုအမှုနှင့်စွဲ [အင်တာနက်] ၂၀၀၆ ။ http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/ibq/report.pdf.
86. ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု၏ Brenner V. စိတ်ပညာ: XLVII ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲလမ်းမှု၏ပြသနာများ - အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစစ်တမ်း၏ရက်ပေါင်း ၉၀ ။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 90; 1997: ။ 80-879 ​​။ [PubMed]
87. Hahn A, ဂျေရုဆလင်အမ်Reliabilität und Validität in der Online-Forschung ။ In: Theobald A၊ Dreyer M၊ Starsetzki T၊ အယ်ဒီတာများ။ အွန်လိုင်း - Marktforschung လက်စွဲစာအုပ်။ Beiträge aus Wissenschaft und Praxis ။ Wiesbaden: Gabler; ၂၀၀၁ ။
88. Pratarelli M, Browne B, Johnson K. ကွန်ပြူတာ / အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏အားသာချက်များနှင့်အချက်များ - အချက်တစ်ချက်စီစစ်သည့်ချဉ်းကပ်နည်း။ Behav Res နည်းလမ်းများ Instrum Comput ။ 1999; 31: 305-314 ။ [PubMed]
89. Caplan အက်စ်ပြProbleနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ: သီအိုရီ -based သိမြင် - အပြုအမူတိုင်းတာခြင်းတူရိယာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ Comput Human Behav 2002; 18: 553-575 ။
90. Davis က RA ။ ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှု၏တစ် ဦး ကသိမြင် - အပြုအမူပုံစံ။ Comput Human Behav 2001; 17: 187-195 ။
91. Davis R, Flett G, Besser A. ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတိုင်းတာရန်စကေးအသစ်၏အတည်ပြုခြင်း - အလုပ်မလုပ်မီစစ်ဆေးခြင်းအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ Cyberpsychol Behav ။ 2002; 5: 331-345 ။ [PubMed]
92. Beard K. အင်တာနက်စွဲ - လက်ရှိအကဲဖြတ်နည်းစနစ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကဲဖြတ်မေးခွန်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Cyberpsychol Behav ။ 2005; 8: 7-14 ။ [PubMed]
93. Kalichman SC, Rompa D. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသမာမှုစကေး - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသူများနှင့်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု။ J Pers Assessment ။ 2001; 76: 376-395 ။ [PubMed]
94. Gaither GA, Sellbourn အမ်၏လိင်စိတ်ခံစားချက်ရှာဖွေသည့်အတိုင်းအတာ - လိင်ကွဲလိင်ကောလိပ်ကျောင်းသားနမူနာအတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှု။ J Pers Assessment ။ 2003; 81: 157-167 ။ [PubMed]
95. Carnes P. အချစ်ဟုမခေါ်ပါနှင့်။ နယူးယောက်: Bantam စာအုပ်များ; 1991 ။
96. Grüsser SM, Mörsen C, Thalemann R, Albrecht U. Fragebogen zur differenzierten Anamnese exzessiver Verhaltensweisen (FDAV) 2007. ထုတ်ဝေမှုမပြုနိုင်သေးသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
97. Grüsser SM, Mörsen CP, Wölfling K, Düffert S, Albrecht U, Flor H. Fragebogen zur differenzierten Drogenanamnese (FDDA) [စွဲလမ်းမှုအပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းလွှာ] Göttingen: Hogrefe Testsystem; 2007 ။
GMS Psycho-Social-Medicine မှဆောင်းပါးများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည် ဂျာမန်ဆေးသိပ္ပံ